Muuri News Network » Dhageyso: Xildhibaanadii Raashiin qeybin kawaday Marka iyo Lambar50 oo Calool Xumo la ilmeeyay.
Dhageyso: Xildhibaanadii Raashiin qeybin kawaday Marka iyo Lambar50 oo Calool Xumo la ilmeeyay.
Jun 11, 2017 - Comments off
Waxaa weli ku sugan Gobolka Shabeelaha Hoose Wasiiro, xildibaano Aqalka Hoose iyo Aqalka saraba ah oo ka soo jeeda gaar ahaan Degmooyinka Marka iyo No.50, waxa ayna halkaasi u joogaan in waxka qabtaan xaaladaha bani aadanimo ee ku soo korartay Deegaanadaas.
Wafdiga waxaa ka mid ah, wasiir ku xigeenka kaluumeysiga iyo kheeyraadka badda xildhibaan cabdullahi abshiroow, wasiir ku xigeenkii hore ee gaashaan dhiigaa cabdalla xuseen cali, xil.aqalka sare Xuseen Cali Xaaji iyo gudoomiye ku xigeenka Gobolka shabeelaha hoose xassan shine.
Wafdiga ayaa raashiin qeybin ka bilaabay degmooyin iyo tuulooyinka ay deganyihiin shabacabka ay dowladda ku matalaan waxaana ka mid ah Muuri, Shalambood, Buufoow, ceelwareegoow oo dhamaan toodba ka kala tirsan degmooyinka Marka iyo No.50.
Wafdiga ayaa sheegay in ay aad uga murgooden xaaladda ay ku suganyihiin shacabkooda waxa ayna dowladda ugu baaqeen in ay shacabkan soo booqdaan oo indhahooda ku arkaan dhibaatada meesha ka jirta ayna si deg deg wax uga qabtaa.
Wixii faahfaahin ah ee ku soo kordha ariamhan si toos ayaad ugala socon doontaan anagoo idiin soo gudbin doona sawiro muujinayo sida ayy u dhacday raashiin qeybinta.